တက္က သိုလ်ဝင် တန်းစာမေးပွဲနှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်သွား တဲ့ ညီမလေး အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေ တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး – Let Pan Daily
တက္က သိုလ်ဝင် တန်းစာမေးပွဲနှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်သွား တဲ့ ညီမလေး အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေ တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝနဲ့ အနုပညာလောကကို ရောက်ရှိလာပြီး ယနေ့ထိလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် ဝန်းရံအားပေးမှုကို ရရှိထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဝါဆိုမိုးဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှတရားတွေကြောင့် ပုရိသတွေ ဝန်းရံအားပေး နေကြ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုဟာ ခေတ်ရှေ့ပြေး ဖက်ရှင်တွေကို လိုက်ဖက် အောင် ဝတ်စားတ တ်တဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါဆိုသာမကဘဲ သူမရဲ့ ညီမလေးတွေကလည်း အရမ်းကိုချောမောပြီး ချစ်စရာကောင်းတာကြောင့် အားလုံးက ချစ်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုဟာ ညီမတွေအားလုံးနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း သူမတို့ညီအစ်မတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးလေးကို အားကျနေ ကြ တာလ ည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကလည်း ဝါဆိုရဲ့ လူမှုကွန်ယ က်စာမျက်နှာမှာ ပုံလေး တစ်ပုံ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ” အိမ်က Crystal Shune တော့အောင်သွားပြီ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုရဲ့ ညီမလေးဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကြီးကို နှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် အစ်မဖြစ်သူ ဝါဆိုတစ်ယောက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ဝမ်းသာ ပျော်ရွှင် ရအောင် ဒီသတ င်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန် လည် ကူးယူ တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ကလေးသရုပျဆောငျဘဝနဲ့ အနုပညာလောကကို ရောကျရှိလာပွီး ယနေ့ထိလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျ ဝနျးရံအားပေးမှုကို ရရှိထားသူကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ဝါဆိုမိုးဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျ ကောကျကွောငျး အလှတရားတှကွေောင့ျ ပုရိသတှေ ဝနျးရံအားပေး နကွေ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝါဆိုဟာ ခတျေရှေ့ပွေး ဖကျရှငျတှကေို လိုကျဖကျ အောငျ ဝတျစားတ တျတဲ့ မငျးသမီးလေး တဈလကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဝါဆိုသာမကဘဲ သူမရဲ့ ညီမလေးတှကေလညျး အရမျးကိုခြောမောပွီး ခစြျစရာကောငျးတာကွောင့ျ အားလုံးက ခစြျနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဝါဆိုဟာ ညီမတှအေားလုံးနဲ့ ခစြျခစြျခငျခငျ နသေူတဈယောကျဖွဈတာကွောင့ျ ပရိသတျတှကေလညျး သူမတို့ညီအဈမတှရေဲ့ ဆကျဆံရေးလေးကို အားကနြေ ကွ တာလ ညျး ဖွဈပါတယျ။ မနေ့ညကလညျး ဝါဆိုရဲ့ လူမှုကှနျယ ကျစာမကြျနှာမှာ ပုံလေး တဈပုံ တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ ” အိမျက Crystal Shune တော့အောငျသှားပွီ ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝါဆိုရဲ့ ညီမလေးဟာ တက်ကသိုလျဝငျတနျးစာမေးပှဲကွီးကို နှဈခငြျးပေါကျအောငျမွငျခဲ့တာကွောင့ျ အဈမဖွဈသူ ဝါဆိုတဈယောကျ ဝမျးသာဂုဏျယူနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ဝမျးသာ ပြောျရှှငျ ရအောငျ ဒီသတ ငျးလေးကို တဈဆင့ျပွနျ လညျ ကူးယူ တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနောျ။
ဓါတ်ဆရာ ရဲ့ ရိုက်ချက်ကို ကြွေတာလား? ရတီ့ကို ကြွေတာလား? လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ “သင်းရတီခင်”
ရေကူးခန်း ထဲမှာ အလန်းစား ရိုက် ထား တဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ မော်ဒယ် စတယ်လာ